Ndịàmà Jehova—Ndị Ji Nkwenye Siri Ike Na-aga n’Ihu!
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Jenụwarị 15, 2001
GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Moore Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Sranantongo Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Zulu
Akụkọ Nzukọ Kwa Afọ
N’OGE a ịrụ eziokwu ụka na inwe obi abụọ jupụtara ebe nile, Ndịàmà Jehova pụtara ìhè dị ka ndị Kraịst nwere nkwenye siri ike. E mere ka nke a pụta ìhè ná nzukọ kwa afọ nke Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, nke e nwere n’Ụlọ Mgbakọ nke Ndịàmà Jehova dị na Jersey City, New Jersey, na Saturday, October 7, 2000. *
N’okwu mmeghe ya, onyeisi oche, bụ́ John E. Barr, bụ́ onye so n’Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova, kwuru, sị: “N’ime ọtụtụ ijeri ndị bi n’ụwa, anyị maara ma kwere na e mewo ugbu a ka Ọkpara Jehova hụrụ n’anya, bụ́ Kraịst Jisọs, nọkwasị n’ocheeze n’eluigwe, na-achị n’etiti ndị iro ya.” E gosịrị ihe àmà nke nkwenye siri ike dị otú ahụ n’akụkọ isii na-akpali akpali sitere gburugburu ụwa.
Iji Eziokwu Bible Merie Mgbaasị na Haiti
Mgbaasị jupụtara ebe nile na Haiti. “Dị ka ọ na-adịkarị,” ka onye nhazi Kọmitii Alaka bụ́ John Norman kọrọ, “ndị mmadụ na-abanye n’òtù voodoo iji chebe onwe ha.” Otu dibịa afa malitere inwe obi abụọ mgbe otu ụkwụ ya gbajiri n’ihe mberede. ‘Olee otú nke a pụrụ isi mee m ma ọ bụrụ na ndị mmụọ na-echebe m?’ ka o chere. Dịkwa ka ha na-eme n’ebe ọtụtụ ndị ọzọ nọ, Ndịàmà Jehova kụziiri nwoke a eziokwu ahụ, e nyekwaara ya aka inwere onwe ya pụọ ná mgbaasị. Ohere e nwere maka uto na Haiti pụtara ìhè n’eziokwu ahụ bụ́ na n’April 19, 2000, ọnụ ọgụgụ ndị bịara Ememe Ncheta ọnwụ Kraịst ji okpukpu anọ karịa ọnụ ọgụgụ ndị nkwusa Alaeze nọ n’ala ahụ.
Ịnụ Ọkụ n’Obi n’Ókèala Sara Mbara nke Korea
Pasent 40 nke Ndịàmà Jehova nọ na Korea nọ n’ozi oge nile. “N’ihi usuu ndị a dị egwu,” ka onye nhazi Kọmitii Alaka bụ́ Milton Hamilton kwuru, “a na-arụzu ókèala anyị nke nwere ihe karịrị nde mmadụ 47 ihe dị ka otu ugbo n’ọnwa.” Uto a na-enwe n’ọgbakọ ndị e ji asụsụ ndị ogbi eme ihe na ha dị ịrịba ama karịsịa. N’otu sekit asụsụ ndị ogbi, a na-eduzi ọmụmụ Bible ebe obibi 800. Nke a bụ nkezi nke otu ọmụmụ ihe maka onye nkwusa ọ bụla. N’ụzọ dị mwute, a ka na-atụ ụmụnna nwoke na-eto eto mkpọrọ n’ihi nnọpụiche ha. Otú ọ dị, a na-emeso ndị Kraịst a na-ekwesị ntụkwasị obi ihe n’ụzọ dị mma, a na-enyekarịkwa ha ọrụ ndị chọrọ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Imezu Ihe Uto E Nwere na Mexico Na-achọ
Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ndị mkpọsa Alaeze 533,665 nyere akụkọ ozi na Mexico n’August 2000. Ndị bịara Ememe Ncheta ji okpukpe atọ karịa ọnụ ọgụgụ ahụ. “Ihe mgbaru ọsọ anyị n’afọ a bụ iwukwu Ụlọ Nzukọ Alaeze 240,” ka onye nhazi Kọmitii Alaka bụ́ Robert Tracy kwuru. “Ma,” ka ọ gbakwụnyere, “anyị chọrọ ọtụtụ ndị ọzọ.”
Ndị ntorobịa nọ n’etiti Ndịàmà Jehova nọ na Mexico na-esetịpụ ezi ihe nlereanya. Otu onye ụkọchukwu Katọlik kwuru banyere otu onye na-eto eto, sị: “Ọ ga-amasị m inwe nnọọ otu onye dị ka ya n’ime ụmụazụ m. Ana m enwe mmasị n’ebe ndị a nọ n’ihi mkpebi ha siri ike na otú ha si eji Bible eme ihe n’ụzọ amamihe. Ha agbachiteworo Chineke, ọbụna mgbe ime otú ahụ tinyere ndụ ha n’ihe ize ndụ.”
Iguzosi Ike n’Ezi Ihe n’Etiti Ọgba Aghara na Sierra Leone
Kemgbe April 1991, mgbe agha obodo tiwapụrụ na Sierra Leone, e gbuwo, kwarụọ, ma ọ bụ merụọ ọtụtụ puku mmadụ ahụ. “Agha na ihe isi ike enwewo mmetụta miri emi n’ebe ụmụ mmadụ nọ,” ka onye nhazi Kọmitii Alaka bụ́ Bill Cowan kọrọ. “Ọtụtụ ndị na-enwebughị mmasị n’ozi anyị na-ejizi mmasị ege ntị. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ndị mmadụ ịbịa nzukọ mbụ ha n’Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị dị iche iche n’abụghị ndị a kpọrọ akpọ. A na-akwụsịkarị ụmụnna n’okporo ámá ma rịọ ha maka ọmụmụ Bible.” N’agbanyeghị ọgba aghara a nọgidere na-enwe ná mba ahụ, ọrụ nkwusa Alaeze ahụ na-amịpụta mkpụrụ na Sierra Leone.
Usoro Ihe Owuwu Sara Mbara na South Africa
Ka ọ dị ugbu a, e nwere mkpa maka ọtụtụ puku Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ókèala alaka ụlọ ọrụ dị na South Africa na-elekọta. E wuworị ọtụtụ narị ụlọ nzukọ. “Kama izukọ ná nkịkara ụlọ ma ọ bụ n’okpuru osisi, dị ka a na-eme n’oge gara aga, ụmụnna anyị nweziri ike izukọ n’ebe kwesịrị ekwesị nke nwere oche ndị dị mma,” ka onye so na Kọmitii Alaka bụ́ John Kikot kwuru. “N’agbanyeghị na e wuru ihe ka ọtụtụ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ndị a n’ụzọ dị mfe, ha na-apụtakarị ìhè dị ka ndị kasị mma n’ógbè ha. N’ebe ụfọdụ, a chọpụtawo na mgbe ọ bụla e wusịrị Ụlọ Nzukọ Alaeze, ọgbakọ ahụ na-amụba ihe karịrị okpukpu abụọ n’afọ na-esonụ.”
Ìgwè Ọhụrụ nke Ndịàmà na Ukraine
N’afọ ije ozi 2000, ala a nwere ọnụ ọgụgụ ya kasị elu nke ndị nkwusa 112,720. Ihe karịrị 50,000 n’ime ha mụtara eziokwu Bible n’ime afọ ise gara aga. “N’ezie, Jehova azụlitewo ìgwè ọhụru nke Ndịàmà na-eto eto iji kpọsaa aha ya!” ka John Didur, bụ́ onye nhazi Kọmitii Alaka kwuru. “N’ime afọ abụọ gara aga,” ka ọ gbakwụnyere, “anyị enyefewo ihe karịrị nde magazin 50, bụ́ nke ya na ọnụ ọgụgụ ndị bi ná mba ahụ ha nhata. Kwa ọnwa, anyị na-anata nkezi nke otu puku akwụkwọ ozi sitere n’aka ndị nwere mmasị bụ́ ndị na-arịọ maka inwetakwu ihe ọmụma.”
Akụkụ Ndị Ọzọ Na-akpali Akpali nke Ihe Omume Ahụ
Daniel Sydlik, onye so n’Òtù Na-achị Isi, kwuru okwu na-adọrọ mmasị. Isiokwu bụ́ “Ụzọ Òtù Na-achị Isi Si Dị Iche n’Ebe Ụlọ Ọrụ Iwu Kwadoro Dị,” bụ́ nke pụtara na magazin a, dabeere n’okwu ahụ na-enye ihe ọmụma.
Theodore Jaracz nke so n’Òtù Na-achị Isi kwuru okwu na-akpali iche echiche nke isiokwu ya bụ “Ndị Nlekọta na Ndị Ohu Na-eje Ozi, Ndị E Ji Usoro Ọchịchị Chineke Ahọpụta.” Otu n’ime isiokwu ndị pụtara na magazin a dabeere n’isiokwu ahụ.
Nzukọ kwa afọ ahụ gụnyekwara okwu na-akpali akpali nke otu onye so n’Òtù Na-achị Isi bụ́ David Splane kwuru n’isiokwu dịịrị afọ 2001. N’ịbụ nke dabeere n’okwu Pọl onyeozi, ọ bụ: ‘Guzonụ dị ka ndị zuru okè, ndị kwezuwokwara ihe nile Chineke na-achọ.’ (Ndị Kọlọsi 4:12) Ndịàmà Jehova gburugburu ụwa na-ekpebisi ike ime nke ahụ ka ha ji ikwesị ntụkwasị obi na-ekwusa ozi ọma nke Alaeze Chineke n’ụwa nile.—Matiu 24:14.
^ par. 3 E ji ígwè electronic mee ka ndị nọ n’ọtụtụ ebe ndị ọzọ kere òkè n’ihe omume ahụ, na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị gara ya bụrụ 13,082.
Gịnị Mere A Ga-eji Zụlite Omume Ọma?
Otú Anyị Pụrụ Isi Zụlite Omume Ọma
“Ọrụ Magburu Onwe Ya”
Ndị Nlekọta na Ndị Ohu Na-eje Ozi, Ndị E Ji Usoro Ọchịchị Chineke Ahọpụta
Ndị Na-eme Okwu Chineke Na-enweta Obi Ụtọ
Ụzọ Òtù Na-achị Isi Si Dị Iche n’Ebe Ụlọ Ọrụ Iwu Kwadoro Dị
Ọkwà Pụrụ Iche
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jenụwarị 15, 2001
Jenụwarị 15, 2001
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jenụwarị 15, 2001